आफ्नो घर आफैँ भत्काउन थालेपछि... - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
प्रकाशित : मङ्गलबार, साउन २८, २०७६११:३५ पब्लिक आवाज /संवाददाता
दिक्तेल ,बिहान ११ बजेको थियो । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलबजारमा दैनिक उपभोग्यवस्तु किनमेल गर्ने सर्वसाधारणको बाक्लै चहलपहल शुरु भइसकेको थियो । किनमेल गर्ने र प्रशासनिक काम गर्न गाउँबाट आएका सर्वसाधारणको हुललाई उछिन्दै हेलमेट लगाएको सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको टोली हातमा ढाल र लाठी बोकेर रत्नपार्कतर्फ जाँदै थियो ।
केही छिनपछि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कर्मचारी सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र डोजर लिएर रत्नपार्क पुगे । करीब १२ बजे रत्नपार्क पुगेका नगरपालिकाका कर्मचारीको सोमबारको काम (ड्युटी) थियो मापदण्डविपरीत बनेका घरटहरा जसरी पनि डोजर लगाएर भत्काउने । तर, रत्नपार्कका स्थानीयवासीले प्रहरी र कर्मचारी आइपुग्नुअघि नै आफ्नो घर आफँै भत्काउन थालिसकेका थिए ।
नगरपालिकाले जसरी पनि घरटहरा हटाउने भएपछि अहिले दिक्तेलबजार तथा आसपासका स्थानीयवासीले आफ्नो घरटहरा आफँै हटाउन शुरु गरेका छन् । मापदण्डविपरीतका घरटहरा हटाउन नगरपालिकाले समयसीमा पनि दिएको छ । दिक्तेलबजारको अल्छेढुङ्गाबाट शुरु गरिएको अभियान क्रमशः नगरपालिकाको सबै वडामा पु¥याइने नगरउपप्रमुख विणादेवी राईले बताउनुभयो । “पहिलो चरणमा दिक्तेलबजारका घरटहरा हटाउन थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो चरणमा घरटहरासँगै अन्य संरचना भत्काएर व्यवस्थित गरिनेछ ।”
आज काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा मेघ गर्जन सहित बर्षाको सम्भावना !
काठमाडौँमा आज तेश्रो पटक भुकम्पको धक्का महशुस !
प्रहरीले बाटोमा भेटको १ लाख ६४ हजार फिर्ता गरे